China izongezo zesanti yodaka lwesamente eyomileyo Ukwenziwa kunye neFactory | Fluffier
Inkxaso yobugcisa kwi-Intanethi, uQeqesho kwi-Onsite, uHlolo lwe-Onsite
Ihotele, Imizi-mveliso eyahlukeneyo okanye udaka lolwakhiwo loluntu
I-additive mortar eyomileyo isetyenziselwa ukuvelisa udaka olomileyo olusele luxutywe kwaye lufanelekile kwi-plaster yokwenziwa kunye ne-masonry mortar. Kuphela i-0.04% yokusetyenziswa kwe-admixture inokuzisa umphumo ocacileyo kwaye i-dosage isetyenziswe ngokwemfuno yemveliso ukwenzela ukuba kuphuculwe ukusebenza kodaka njengokusebenza, ukuchithwa, amandla, ukushwabana kunye nokumelana nokukhenkceza.
Njengomxube wekhonkrithi, umxube wodaka olomileyo unokomeleza ukusebenza kodaka lwesamente ngokuphucula ukusebenza, indawo yokugcina amanzi kunye nobuchule bokwenza izitena kunye nokunciphisa inkcitho yesamente nekalika. Umxube wodaka olomileyo unokusasaza ngokufanelekileyo, umise kwaye ugwebe isamente ukuze kulungiswe ingxaki eqhelekileyo yokuxobuka kunye nokuqhekeka. Le ngxubevange inokunyusa ukugcwala kodaka kwaye idlale indima esebenzayo ekuchaseni umkhenkce, ukucutha amanzi, ukuchasana nokugqobhoza, ukuchasana nokuqhekeka, ukugcinwa kobushushu kunye nokugquma emva kokuqina.
Isetyenziswa kwiimveliso zesamente ezifana nodaka olwahlukeneyo lwemizi-mveliso okanye lwasekuhlaleni, udaka lokutyabeka, udaka lwesamente, ishingle ye-asbestos, izitena ezingenanto kunye nebhodi ekhanyayo.
1.Amava atyebileyo kwimveliso kunye nesicelo.
2.Umvelisi wokuqala owaphanda ngokuzimeleyo, waphuhlisa kwaye wavelisa iimveliso ezongezelelweyo zemichiza yokwakha, kubandakanywa umgubo wePolymer Redispersible, iHydroxypropyl Methyl Cellulose, iPolyvinyl Alcohol kunye neSuperplasticizer kwiPhondo laseHebei.
3.Uluhlu olubanzi lweemveliso ezongezelelweyo zokwakha.
Ukuhanjiswa kwe-5.Fast kunye nenkonzo ebalaseleyo emva kokuthengisa.
Ngaphambili: Umgangatho ophezulu woKwakha ixabiso eliphantsi usebenzisa i-Dry Mortar Additive
Okulandelayo: Fine Factory ixabiso lesamente yokusila aid Cement Additive
Izongezo zodaka olomileyo
Umzi-mveliso obonelelwe ngezongezo zodaka
IFactory Supply Mortar Additive
Umgangatho oLungileyo wezongezo zoMdaka owomileyo
Ukongezwa koMgangatho oLungileyo woMgangatho
Umgangatho ophezulu wokongeza udaka
Izongezo zodaka ezikumgangatho ophezulu
Umgangatho oPhezulu oManzi woDibaniso lweMortar
Ixabiso eliphantsi Izongezo zoMdaka owomileyo
Ixabiso eliphantsi Izongezo zeMortar
Ixabiso eliphantsi Sixuba i-Mortar Additive
Idizayini yodaka oluphezulu lweBanga
Izongezo zeBanga eliphezulu lodaka
IBanga eliPhezulu eliManzi lokuDiba izincedisi zodaka
Izongezo zeNqanaba eliphezulu lodaka
iNqanaba eliPhezulu eliManzi elidityanisiweyo lodaka lokudibanisa
Inqanaba eliphezulu elimanzi elixutywe nodaka lwezongezo
Umgangatho ophezulu wezongezo zodaka olomileyo
Umgangatho oPhezulu oManzi oDibeneyo lwezongezo zodaka
Umxube wodaka olumanzi oluxubeneyo
Ukuxutywa okumanzi koMdaka Ukongeza
Ukuxuba Udaka lwezongezo ezimanzi
Isongezo sodaka olumanzi-Ukuxuba
Ukwakhiwa kweXabiso eliPhantsi eliPhezulu kusetyenziswa iDry Mort...
Umxube wekhonkrithi owomileyo owomileyo oxubeneyo nodaka...